सबैले जितेको क्रिकेट प्रतियोगिता!
ऋग्वेद शर्मा बिहीबार, कात्तिक ७, २०७६, १८:५९
काठमाडौं- क्याट क्विन्स काठमाडौंलाई ४५ रनले पराजित गर्दै पहिलो पटक आयोजना भएको टी २० महिला क्रिकेट फ्रेन्चाइज प्रतियोगिता ‘वुमन्स च्याम्पियन्स लिग’ को उपाधि चितवन राइनोजले जित्यो।
तर, फाइनलमा कमजोर ब्याटिङका कारण हार भोगेको काठमाडौंकी कप्तान रुबिना क्षेत्रीले भनेजस्तै ‘कोही पनि पराजित हुनुपरेको दुःखमा छैनन्, प्रतियोगिताले महिला क्रिकेटको जित भएको छ।’ हरेक समय ‘हामीले पनि केही खेल्न पाऔँ’ भन्दै आवाज उठाइरहेका उनीहरुले खेल्न पाएका छन्। घरेलु मैदानमा नयाँ क्रिकेटको अनुभवसँगै आत्मविश्वास बढाएका छन्।
तब त रुबिना भन्छिन्- ‘हामी फाइनलमा पराजित भयौँ, उपाधि जित्न नपाउँदाको थोरै नमजा त भइहाल्छ तर समग्रमा महिला क्रिकेटले जितेको छ, उपाधि उचाल्ने पनि हाम्रै महिला क्रिकेटर साथीहरु नै हो, त्यसैले यो प्रतियोगितामा सबैको जित भएको छ।’
नेपाली राष्ट्रिय महिला टिमकी कप्तानसमेत रहेकी रुबिना प्रतियोगिताकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडीसमेत बनिन्। सर्वोत्कृष्ट बनेपछि एउटा स्कुटर र ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाएकी उनी नेपाली महिला क्रिकेटमा नयाँ खेलाडी भित्रने बाटो बनेकोले धेरै खुसी लागेको बताउँछिन्।
‘हामीले चितवनको खेलको तारिफ गर्नै पर्छ। ठूलो फाइनलको दबाब हाम्रा खेलाडीहरुले लिए कि जस्तो लाग्छ, हारेर पनि हामी धेरै बेखुसी छैनौँ, खुसी छौँ सबैले धेरै राम्ररी खेलेका छन्। राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमको कप्तान हुनुको खुसी पनि लागिरहेको छ’ रुबिना भन्छिन्, ‘हरेक दिन हामी खेलमा सुधार गर्न सकौँ भन्ने नै सोच्छौँ, यसले सागका लागि पनि सहयोग गर्नेछ। नयाँ खेलाडीहरुमा पनि सम्भावना धेरै देखिएको छ।’
रुबिनाले प्रतियोगितामा खेलेका ६ खेलमा दुई अर्धशतकसहित २ सय १४ रन बनाएकी थिइन्। अलराउण्ड खेल प्रदर्शन गरेकी उनले ५ विकेट पनि लिएकी थिइन्। फाइनलमा दुई रनमा नै आउट भए पनि त्यसअघिको उनको खेलले सर्वोत्कृष्ट खेलाडी चुनिन् सहयोग भयो।
फाइनलमा चितवनले दिएको १ सय १३ रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको काठमाडौंले २० ओभर पूरा खेलेर अलआउट हुँदै ६७ रन मात्रै बनाउन सकेको थियो। काठमाडौंकी ममता थापाले १३ रन, अप्सरी बेगमले १५ रन साथै ईश्वरी बिष्टले १३ रन बनाए। चितवनकी सुमन खतिवडा र ऋतु कनोजियाले तीन-तीन विकेट लिए।
पहिले ब्याटिङ गरेको चितवनका लागि सुमन खतिवडाले सर्वाधिक २९ रन बनाएकी थिइन्। कप्तान इन्दु बर्माले २२, काजल श्रेष्ठले २१ तथा कन्चन श्रेष्ठले १९ रन जोडेका थिए। उपाधिसँगै चितवनले ७ लाख र उपविजेता काठमाडौंले ३ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाए।
लिगमा अपराजित रहँदै विजेता बनेको चितवनकी कप्तान इन्दु बर्मा फाइनलमा काठमाडौंले टस जितेर पनि फिल्डिङ रोज्नु गल्ती भएको बताउँछिन्। ‘काठमाडौं हामीसँगै पहिलो खेलमा हारेर पनि निकै राम्रो कमब्याक गरेको थियो, तर फाइनलमा फेरि हामीले हरायौँ। आजको अवस्था हेर्दा टस जितेर पनि पहिले फिल्डिङ गर्नु गल्ती हो कि जस्तो लाग्छ’ उनले भनिन्।
महिला क्रिकेटमा पहिलो फ्रेन्चाइज प्रतियोगिताको उपाधि जित्न पाउँदाको खुसी ब्याख्या गरेरै नसकिने भन्दै इन्दु भन्छिन्- ‘पहिलो खेलदेखि नै जित्दै आएर हामीले उपाधि नै जित्यौँ, त्यसले असाध्यै खुसी लागेको छ। यो उपाधिको खुसी शब्दमा ब्याख्या गर्नै सकिँदैन, महिला क्रिकेटमा ठूलो प्रतियोगिताको सुरुवात हुनु सबैका लागि खुसीको कुरा हो। धेरै दर्शकको साथ पनि पायौँ। माहोल निकै राम्रो भयो।’
चितवनकी कप्तान इन्दुले भनेजस्तै फाइनल खेलमा दर्शकको साथ राम्रो रह्यो। चोभार इन्डमा छरिएर रहेका सयौँ दर्शक खेल सकिएसँगै हुटिङ गर्दै मैदानमा नै प्रवेश गरेका थिए। खेलका दौरान पनि दर्शकहरु खेलाडीको नाम लिएरै हौसला दिइरहेका देखिन्थे। महिला खेलाडीको हौसला बढाउन पुगेका पुरुष टिमका खेलाडीहरु पारस खड्का र ज्ञानेन्द्र मल्लको उपस्थितिले दर्शक अझ हौसिएका देखिन्थे।
खेलपछि मैदानमा नै प्रवेश गरेका दर्शकहरु खेलाडीसँग तस्बिर लिन र कुराकानी गर्न आतुर थिए। नेपाली क्रिकेटमा भइरहेको हरेक गतिविधिसँग जानकार उनीहरु कप्तानबाट राजीनामा दिएका पारस नै राष्ट्रिय टिमको कप्तानमा फर्कनुपर्नेसम्मका नारा लगाइरहेका थिए। महिला खेलाडीहरुसँग पनि प्रत्यक्ष भेटेर नै बधाइ दिन पाइरहेका उनीहरु निकै खुसी थिए।
यसैले प्रतियोगिताको आयोजक क्विन्स इभेन्ट म्यानेजमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक छुम्बी लामा महिला क्रिकेटको विकासमा दर्शकले दिएको साथले पनि आफूहरुको काम सफल भएको खुसी अझ बढेको सुनाउँछन्। ‘राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा यति धेरै दर्शकको साथ पाइनु खुसीको कुरा हो, नेपालमा महिला क्रिकेटको विकासमा यसले पक्कै सहयोग गर्नेछ। राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत पनि धेरै दर्शकले खेल नियाल्नुभएको छ। भविष्यमा अझ राम्ररी अघि बढ्न यसले हौसला दिएको छ’ उनले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा मात्रै सहभागी हुनुपर्ने र वर्षभर खाली रहनुपर्ने महिला क्रिकेटरका लागि खेल्ने वातावरण बनाउन सकेकोमा पनि खुसी छन् छुम्बी। उनी भन्छन्- ‘महिला क्रिकेटरहरु खोज्न मुस्किल हुने अवस्था आउन थालिसकेको थियो। यो प्रतियोगिताले धेरै नयाँ खेलाडीहरुलाई पनि अगाडि देखाएको छ, उनीहरुको खेलले अब राष्ट्रिय टिमको छनोटमा समेत निकै सहयोग हुनेछ।’
प्रबन्ध निर्देशक छुम्बीको भनाइसँग राष्ट्रिय महिला टिमका प्रशिक्षक बिनोद दास पनि सहमत छन्। ‘महिला खेलाडीहरुका लागि प्रतियोगिता खेल्न पाउनु ठूलो अवसर हो। जति खेल्न पाउँछन् उति नै निखारिन्छन्। अहिले देखिएका नयाँ खेलाडीले पनि महिला क्रिकेटलाई फाइदा नै गर्नेछ, यसले राष्ट्रिय टिमसम्म उनीहरुको लागि बाटो बन्ने देखिन्छ’ दासले भने।
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को समेत चुनाव भइसकेको अवस्थामा महिला क्रिकेटको घरेलु प्रतियोगितामा अझ विकास होला कि भन्ने आशमा प्रशिक्षक दास देखिन्छन्। ‘अब त क्यान पनि आएको छ। हेरौँ क्यानले पनि महिला क्रिकेटको विकासका लागि घरेलु प्रतियोगितामा राम्ररी अगाडि बढ्छ नै होला। वर्षमा यस्ता खाले प्रतियोगिताहरु तीन चार वटा भइदिने हुन् भने धेरै सहयोग पुग्नेछ’ उनले भने।
प्रतियोगितामा चितवन राइनोज र क्याट क्विन्स काठमाडौंसँगै पोखरा पल्टन, ललितपुर फाल्कोन्स, विराटनगर टाइटन्स गरी ५ सहरका नाममा ५ टिम सहभागी भएका हुन्। जसमा हरेक टिममा १४ गरी ७० खेलाडी आबद्ध रहेका छन्। जो २५ हजारदेखि ७५ हजारसम्ममा टिममा आबद्ध भएका थिए। यसले गर्दा एकैपटक ठूलो संख्यामा महिला खेलाडीको क्रिकेट विकासमा सहयोग गरेको प्रशिक्षक दास बताउँछन्।
चितवनका प्रशिक्षक सामसङ जङ थापा पनि महिला क्रिकेटमा भएको राष्ट्रिय स्तरको फ्रेन्चाइज लिगले क्रिकेटलाई धेरै सहयोग गरेको बताउँछन्। उपाधि जिताएका उनी भन्छन्- ‘महिला क्रिकेटको विकासका लागि यस्ता प्रतियोगिताले धेरै नै सहयोग गर्छ, खेलाडीका लागि खेल्न पाउनुभन्दा ठूलो कुरा अर्को छैन। हामीले त उपाधि नै जितेकाले खुसी अझ बढी छ।’
प्रतियोगितामा चितवनकी कविता गौतम सर्वोत्कृष्ट बलर बनिन्। ५ खेलमा १० विकेट लिएकी उनले २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाइन्। चितवनकै काजल श्रेष्ठ उत्कृष्ट ब्याटर बनिन्। ४ खेलमा १ सय ३४ रन बनाएकी उनले पनि २५ हजार रुपैयाँ नै पुरस्कार पाइन्। यस्तै ६ खेलमा ६ विकेट लिएकी काठमाडौंकी बलर ईश्वरी बिष्टले उदयमान खेलाडीको पुरस्कार स्वरुप १५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाइन्।
प्रशिक्षक बिनोद दास ‘वुमन्स च्याम्पियन्स लिग’ ले महिला क्रिकेटको विकासमा राम्रो सुरुवात गरेको भन्दै यस्ता प्रतियोगिताहरु वर्षमा चार÷पाँच वटा हुन सके खेलाडीहरु आत्मनिर्भर हुने बाटोमा समेत बढ्न सक्ने बताउँछन्।
बिहीबार फाइनल खेलपछि मैदानमा देखिएको माहोलले पनि थप प्रतियोगिताहरु हुन सक्ने छनक त देखाएकै छ।
२००७ मा मलेसियामा एसीसी प्रतियोगितामा सहभागी हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सुरु गरेको नेपाली महिला क्रिकेट टिमले पहिलो पटक घरेलु मैदानमा राम्रो प्रतियोगिता खेल्न पाए। २०१८ को अप्रिलपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आइसिसी) ले सबै सदस्य राष्ट्रबीचको टी २० खेललाई अन्तर्राष्ट्रिय टी २० को मान्यता दिनुले पनि नेपाली टिमको टी २० अनुभव बढाउन यस्ता प्रतियोगिताले सहयोग गर्ने नै छ।
थप तस्बिरमा फाइनल खेल
म्याराडोना : बिर्सन नसकिने एक युग
फर्केर हेर्दा : ४-४-२
एक यात्रा : खप्तडदेखि रारा
म्याराडोना : बिर्सन नसकिने एक युग जीवनमा सफलताको उकालो र कुलतको ओरालो ओर्लेका म्याराडोनाको यात्रा अहिले स्थिर हुँदै गर्दा उनी यो संसारबाटै बिदा भए। कुनै बेला प्रशंसाल... बिहीबार, मंसिर ११, २०७७
अब नेपाली फुटबल कता? खेलकुद गतिविधि ठप्प हुँदा निराश देखिएका फुटबलर आठ महिनापछि मैदान फर्किए। तर मैदान फर्किएको खुसी खेल नतिजाका कारण टिकिरहन सकेन। बंगला... मंगलबार, मंसिर ९, २०७७
म्यानचेस्टर सिटी जालान् त मेस्सी? इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीमा प्रशिक्षक पेप गार्डिओलाको समय गएको हप्ता दुई वर्ष थपिएसँगै उनीमाथि पहिलो प्रश्न थियो- लियोनल मेस्सी... सोमबार, मंसिर ८, २०७७
बंगलादेशसँग मल खरिदमा पूर्णविराम, मन्त्रिपरिषदले दियो प्रतिस्पर्धामार्फत् जाने विकल्प बिहीबार, मंसिर ११, २०७७
मैदान फर्कियो क्रिकेट, बन्द प्रशिक्षणमा खेलाडी बिहीबार, मंसिर ११, २०७७
डडेल्धुराका केही विकट बस्तीमा खानेपानी बिहीबार, मंसिर ११, २०७७
सरकार मनको गरिब होइन, व्यवसायीलाई गच्छेअनुसार सहयोग गर्छ : प्रधानमन्त्री बिहीबार, मंसिर ११, २०७७
सिभिल बैंकको एक दशक : सामाजिक काम गरेर मनायो वार्षिकोत्सव बिहीबार, मंसिर ११, २०७७
बरु राखेप नै खारेज गरिदिएको भए हुने : किशोरबहादुर सिंह [अन्तर्वार्ता] ऋग्वेद शर्मा/सरोज तामाङ
मेस्सीका लागि ‘इनअफ इज इनअफ’ ऋग्वेद शर्मा
म्याराडोना : बिर्सन नसकिने एक युग बिहीबार, मंसिर ११, २०७७
अब नेपाली फुटबल कता? मंगलबार, मंसिर ९, २०७७
म्यानचेस्टर सिटी जालान् त मेस्सी? सोमबार, मंसिर ८, २०७७